कास्कुनले काठमाडौँका सहकारी तताउँदै « Sahakari Nepal
कास्कुनले काठमाडौँका सहकारी तताउँदै
प्रकाशित मिति : 25 November, 2015 7:55 am
काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (KASCUN) को आगामी बैठकले साधारणसभाको मिति तय गर्ने भएको छ । यसपाली संघको चुनावी साधारणसभा हुने भएकाले जिल्लाका वचत ऋण सहकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूको चासो बनेको हो । कास्कुनमा हालसम्म २१२ वचत ऋण सहकारी संस्था आबद्ध भएका छन् । सम्भवत: शुक्रबार संघको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर साधारणसभाको मिति तय गर्ने सम्भावना छ । निर्वाचित पदाधिकारीको म्याद २०७३ जेठसम्म भएता पनि यसै पुष भित्रै साधारणसभाको मिति तोकेर त्यसै साधारणसभामा चुनाव गराईने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
यस अघि ९ सदस्यिय सञ्चालक समिति रहेको कास्कुनमा यस पटक अध्यक्ष, महिला तथा खुला उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष गरी ५ पदाधिकारी र १० सञ्चालकका साथै १ संयोजकसमेत ३ जना लेखा समिति सदस्य गरी १८ पदमा निर्वाचन हुने संघका सञ्चालक प्रकाश श्रेष्ठले बताए । सहकारी नेपालसँग श्रेष्ठले भने ‘अघिल्लो साधारणसभाबाट विनियम संशोधन गरेर पदहरू थप गरिएको हो ।’ वर्तमान कार्यसमितिले संघलाई सुदृढ गरि सदस्यसंस्थाका लागि अन्तरलगानी लगायतका धेरै सेवा विस्तार गरेकाले जिल्लाका वचत ऋण संस्था कास्कुनमा सदस्य बन्न उत्साहित भएको श्रेष्ठको दावि छ ।
उता साधारणसभाको मिति तय हुने कुरासँगै चुनावी चहलपहल र रणनीति सुरु भइसकेको छ । सहकारीमा एमाले निकट समुह र काँग्रेस निकट नेशनल कोअपरेटर्स एलाईन्स समुह संगठित रूपमा प्रतिष्पर्धामा उत्रने गरेका छन् । कास्कुनको चुनावको तयारीमा एमाले समुह भित्री रूपमा सक्रिय भइसके पनि काँग्रेस समुह सधैँ झैँ सुस्त नै देखिएको छ । चुनावको मिति तय भएपश्चात आबद्ध भएका संस्थाको मताधिकार नहुने भएकोले बैठक अघि संस्था आबद्ध गराउन उक्त समुह लागि परेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वर्तमान सचिव केशव दंगाल अध्यक्षका आकांक्षी भएकाले संस्था खोज्ने कार्यमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । तर हालसालै आबद्धताको क्रम भने खासै बढेको छैन । स्रोत भन्छ, ‘बैठकको दिनसम्ममा एमाले समुहबाट झण्डै सयको हाराहारीमा आबद्धता हुने सम्भावना छ ।’ हाल आबद्ध संस्थाको स्थिति हेर्दा एमाले समुह ६० प्रतिशत र काँग्रेस समुह ४० प्रतिशतमा रहेको अनुमान छ । यदि स्रोतको आँकडा साचो हो भने एलाईन्स पक्षधरलाई चुनाव जित्न निकै कसरत गर्नुपर्ने छ । अर्को तिर नेतृत्वकै कुरामा पनि एलाईन्स पक्षले ठोस निर्णय लिईसकेको अवस्था छैन । यस अघिको चुनावमा अधिकांश एमाले पक्षधर रहेको समुहको नेतृत्व गरि प्रजातान्त्रिक पक्षधर शम्भु घिमिरेले अध्यक्षमा चुनाव जितेका हुन् । घिमिरे नै पुन: अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने सम्भवना रहे पनि उनलाई एलाईन्सले आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा स्विकार्ने नस्विकार्ने निश्चित भइसकेको छैन । उनी बाहेकको उम्मेदवार तय गर्दा बलियो उम्मेदवार को उठाउने भन्ने पनि एलाईन्सलाई चुनौती छ । कास्कुनको नेतृत्वले आगामी वर्ष हुने नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (NEFSCUN) लाई निकै प्रभावित पार्ने भएकोले पनि यस चुनावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।